Qaybta 7aad Falanqaynta bogag ka mid ah Buuga (MIYIGA ILAA MADAXTOOYADA socdaalkaygii guusha).Qalinkii C.kariin Xinif | Haldoor News
Qaybta 7aad Falanqaynta bogag ka mid ah Buuga (MIYIGA ILAA MADAXTOOYADA socdaalkaygii guusha).Qalinkii C.kariin Xinif
Qaybta 7aad Falanqaynta bogag ka mid ah Buuga (MIYIGA ILAA MADAXTOOYADA socdaalkaygii guusha).
Waxa aan marayey Ballankii aannu ku kala Tagnay ee ahaa in habeen danbe 9:00pm la isu yimaaddo.
Haddaba 9:00am ayaa waxa ila soo hadlay nin raggayagii ka mid ah oo ii sheegay in shirkii socdo, waxaan weydiiyey waxaynnu isku ogayn caawa ee maxaa beddeley, maxaase dadka loogu wada sheegi waayey, jawaabna imuu siin waayo isagu ballanka xalay muu ogayn, oo waxa qorshuhu ahaa in dadka saaka marka waagu beryo lagu wargeliyo kulanka caawa.
Si kastaba ha ahaatee waxaan tegey madashii iyadoo shirkii aan wax badani ka hadhin oo uu gebagebo ku dhow yahay, saddexdii wasiir ee xalay ii yimi waxa ka joogay Xirsi oo keliya , labadii kale ma hubo inay ka walaaceen iyo in aan ballanka danbe loo sheegin, waxayse u badan tahay ta hore.
In yar ka dib markii dadka badankiisii kala dareereen ayaa intayadii hawsha odayada ka ahayd oo wasiirro badanina ka mid yihiin aannu qol isla gallay, markiiba xirsi ayaa yidhi anigu maadaama aan gacan yarihii madaxweynaha ahay, kala aragtina aannu noqonnay, waan is casilayaa, oo ama waa in aan sida uu rabo kula shaqeeyaa ama waa in an aan ka tagaa.
Arrintaa waxaannu u aragnay Xirsi inuu ku saxsan yahay shakhsi ahaan, waana ku amaanayaa, waayo waa mawqif qof waliba qadan lahaa, masuulka aad la shaqaynayso haddii aanad siyaasaddiisa fulinayn ka tag oo keliya ayaa kuu bannaan.
Hase yeeshee waxa aanan marnaba gar ku siinayn inuu ka ololeeyo in dad kale oo badani is casilaan, oo taasi waxay waxyeello ku ahayd madaxweyne siilaanyo, manay ahayn mid Muuse Biixi wax yeeli karaysey, waxaan odhan karaaba Muuse Biixi waxtar iyo guul bay u ahayd in raggii ay is hayeen ay xisbigii iyo Xukuumaddiiba aga tagaan.
Ogaadana shirkii golaha dhexe waxa ka hadhsan toban maalmood oo si walba waa looga kaban karayaa wixii dhaca, waxase malaha saamayn ay iscasilaaddu yeelan lahayd maalinta shirk aka horraysa ama subaxa shirka intaan gelin in yar ka hor.
Inaatanan taa ka gudbin ninka la yidhaado C/Laahi Geeljire oo Goobta joogey ayaa waxa uu meesha ka sheegay war ah: “Madaxtooyadii Ayaan ka imi oo Cali yare (xog-hayihii Madaxweynaha) xafiiskii waa laga soo saaray, gurigiisa ayuu joogaa, xafiiskiina Baashe Cawil ayaa fadhiiyey iminka Waraaqihiinnii eriga ayaa la qorayey”. Hadda waa Maalin khamiis ah oo Baashe Cawil niman carab ah ayuu Magaalada Sheekh u kexeeyey oo maba joogo, markiiba masuuliyiintii meesha joogey qaarkood ayaa yidhi aynnu kaga horrayno intaan warqaddu soo Bixin, Alla ha u naxariistee Dr Cabdi aw Daahir Cali ayaa yidhi “waar ha ina dedejinina, cadho waa la bariyaa aynnu u kaadinno iscasilaadda” isla markii intaasi afkiisa ka soo baxday ayaa Haddana C/laahi Geeljire oo kadinka qolka taagani isagoo Mobile uu gacanta ku haystey kor u taagey sida qofku markuu wax tuurayo Dr. Cabdi aw Daahir xaggiisana u fiiqay ku yidhi “ Waar fulayohow Ragga ha Bajin”.
Markii Xirsi yidhi waan is casilayaa, qof ayuu la hadlay waxa uu ku yidhi sii daa warqaddii, halkaa waxa iiga soo baxday in warqadda xirsi sii qornayd oo uu hore go,aankan u gaadhey, intaas markuu Xirsi yidhi ayaa Maxamed Biixina Yidhi anna waan is casilayaa.
Halkaa markay marayso oo dhawr qof oo kalena yidhaahdeen Media-ha inoogu yeedha ayaa C/laahi Cukuse iyo anigu aannu nidhi waar bal naga war suga aannu Madaxtooyadii qabannee, waanay naga aqbaleen waxay na yidhaahdeen waannu idin sugaynaa orda oo nagu soo war celiya. Markaannu tagnay iyadoo warka iscasilaadda labada wasiirna noogaba sii horreeyey madaxtooyada, ayaa waxa joogey dad badan oo qaarkood ku faraxsan yihiin is casilaadda, qaarkoodna aanay ku faraxsanayn, Madaxweynihii ayaannu u sheegnay wixii dhacay, waxaannu ka codsannay in aan Labada Wasiir ee is casileyna Laga aqbalin, Ragga inta kalena loo yeedho oo la wada hadlo, Madaxeynihiina waxa uu na yidhi orda oo u yeedha.
Markii aannu soo baxnay ayaa waxa na soo gaadhey warka odhanaya wixiiba way is casileen, Gaadhiga waxa wada Cukuse , aniguna kursiga kale Ayaan fadhiyaa.
C/Laahi cukuse laftiisii ayaa taladii ku ballaadhatay, waxa uu i weydiiyey waar maxaynnu yeellaa, intaan ku qoslay Ayaan idhi oo maxay ah dee, waxa uu yidhi miyaynnu is casilnaa, waxaan ugu jawaabey miyay kaa qasantay taladii, wasiir aniga igama qasna, waayo is casilaadda kumaynnu tashan, waxna iskagamaynnu ogayn, markaa ma dameeri dhan raacday ayaynnu noqonnaa, midda kale miyaanad ogayn waxa qorsheheennu ahaa in aanu Muuse Biixi Murashax ku soo bixin, ee aynnu shirka Golaha dhexe kaga adkaanno, laakiin taladeennu miyay ahayd in aynnu siilaanyo la dagaallanno, maya ayuu iigu jawaab celiyey, waxaan ku celiyey su’aal kale oo ah ma ku qanacsan tahay iminka in dagaalkii Siilaanyo lagu jiheeyey haa ayuu haddan igu yidhi, haddaba nabar aan leeyahay siilaanyo ku dhici maayo, colna u raaci maayo, Siilaanyo iyo Muusena way ii kala laba qof, Su’aasha kale ergo ma ku maqnayn oo intay ina direen ma inagaga bexeen haa ayuu yidhi, oo maxaynnu ku raacna markaa, tii ayuu ila qaatay, sidaa ayaannu kaga hadhnay annagu.
Midise waa iga xasuus markii aannu Madaxtooyada qabannay raggan is casiley qaarbaan meeshaba joogin oo xafiisyadoda iyo guryohooda joogey, intii aannu Ergada ku maqnayn aya aloo yeedhay oo lagu qanciyey inay is Casilaan.
La soco qaybta 8aad iyo war kale.